MASEYR: Ronaldo & Georgina colaad ayaa ka dhex hureysa, Rhian Sugden ayuu Saq dhexe Fariin u diray, muxuu dhaxlay?
Thursday, January 24th, 2019 - 10:16:40
Tuesday January 30, 2018 - 15:58:14 in Wararka by Muuse Cabdi
Cristiano Ronaldo iyo Georgina Rodrigeuz ayaa u muuqda kuwo aan sidii hore isugu faraxsaneyn jeer uu laacibku Xaflad aad qaali u ah u qabtay 24 Gu’ Jirsiga Gacalisadiisa, waxa ugu badan ee la isku Maagayna waxay aheyd in uu Saqda dhexe Shukaansi dadban galay, sida ay tiri Gacalisadiisu maalinta dhalashadeeda ee Axaddii ay ku xuseysay Marbella.
Laacibka kooxda Real Madrid, ayey toddobaadka bartamihiisii ku eedeysay saaxiibtiis in uu Saqda dhexe Fariimo u diray gabadha dharka xayeysiisa ee Rhian Sugden, waxaa sidoo kale ay kasoo muuqatay Garabkiisa mar hore.
Booqashadii magaala xeebeedka Marbella waxaa ay aheyd mid Macaan, balse waxaa ku dheelayay in aysan labada Lammaane qabin Farxaddii looga bartay.
Lammaanaha ayaase waxay ahaayeen kuwo muujinayay xoogaa dhoolla caddeyn u muuqata Been Ronaldo, waa 32-jir, wey soo wada Casheeyeen, waxayna isu muujinayeen wejiyo aan aad u furneyn marka si Qota dheer loo fiiriyo.
Georgina, waxay dhashay gabar lagu magacaabay Alana Martina bishii November, waxay wejigeeda ku qarineysay Boorsada Garabka.
Si waliba, waxay sidatay Funaanad Madow ah, Surwaal Gaab jirka ku dheggan oo Jeenis ah, jilba Gashi kale oo isaguna madow, Kabo iyo Caagga yar ee Qoor xirka ah.
Cristiano ayaa sidoo kale joogay Xafladdeeda, isagoo leh Tintiisii Baliijku ka muuqday ee sida Kafeega u sameysneyd wuxuuna xirnaa Shaar Madow ah, Surwaal sida Jaanta ama Maqaar u dhigan oo madow iyo Boorso Gacan qaad Buluug ah oo Nuuca Kaararka ah.
Gudaha Baarka Cunnada Dareenkoodu aad ayuu u duwanaa, Cristiano ayaa u muuqday mid wax badan kala hadlay Georgina.
Wuxuuna xiddiggu u sheegay gacalisadiisa in aysan jirin wax badan oo xiriir ah oo uu la qeybsaday gabadha xayeysiiska ee Rhian in kastoo la arkay sida ay Giorgina sheegeyso Fariimaha uu dirayay.